भिडियो: बुझ्ने ट्विटर | Martech Zone
भिडियो: ट्विटर बुझ्दै
बुधबार, मार्च 12, 2008 मंगलवार, मार्च 11, 2008 Douglas Karr
म बारेमा लेखे ट्विटर केहि समय पछि, तर यो भिडियो यसलाई महान परिप्रेक्ष्यमा राख्छ। मलाई पछ्याउनुहोस् http://www.twitter.com/douglaskarr.
टैग: साइट परीक्षण
यस तरीकाले दुष्ट केहि आउँछ ...
मार्क्स 12, 2008 मा 4: 22 PM
भिडियो अब उपलब्ध छैन। 🙁
जे भए पनि माइक्रोब्लगिंगको शीर्षकमा: मैले केहि सेवाहरू खोजें जस्तै ट्विटर र टम्बलर, मैले उनीहरूको बारेमा धेरै आकर्षक पाइन। हुनसक्छ यो केवल म नै हुँ, मसँग कडा पर्याप्त समय छ मेरो पूरा ब्लगमा सामानको साथ आउँदो घण्टा कम केहि घण्टा प्रकाशित गर्दै माइक्रोब्लगको माध्यमबाट।
मार्क्स 12, 2008 मा 4: 49 PM
यो अब फिर्ता देखिन्छ, के भयो भनेर निश्चित छैन।
माइक्रो-ब्लगिंग एक कठिन गिग हो, विशेष गरी म जस्तो केटाहरूको लागि जो एक जीविकाको लागि काम गर्दछ। 🙂 मसँग सबै दिन चीजहरू च्याट गर्न समय छैन। म यसलाई 'समाचार टिकर' को रूपमा बढी सोच्छु। म धेरै हेर्नुहोस् महान जानकारी को लागी जब म मा हेर्नुहोस् twhirl दिन भर।
मसँग त्यहाँ कुराकानी गर्न समय छैन - तर धेरै राम्रो सामग्री द्वारा जान्छ। र यसले मलाई आगामी पोष्टहरूको लागि विचारहरू सोच्न मद्दत गर्दछ।
रोक्नु भएकोमा धन्यवाद!
मार्स 13, 2008 मा 10: 06 एएम
मैले तपाईको ब्लागलाई टिप्पणी मार्फत भेट्टाए जुन तपाईंले बज मार्केटि .मा छोड्नुभयो। मलाई साझा क्राफ्ट शो भिडियोहरू मनपर्दछ - ती नयाँ प्रविधिलाई भत्काउँछन् एक तरीका हो जुन बुझ्न सजिलो छ र यसले मलाई साथीहरू र सहकर्मीहरूलाई व्याख्या गर्न मद्दत गर्दछ। ट्विटरको बारेमा यो पोस्ट गर्नु भएकोमा धन्यवाद - म ट्विटर तर अब मैले बुझ्छु किन ट्विटर!